Fitsapam-pahaizana Baiboly - Dinika forum.serasera.org
Fitohizan'ny hafatra : Fitsapam-pahaizana Baiboly
rhaj0 - 08/11/2017 21:12
Ka sirika be teto izany fa ry Miharena sy RBNIR kay (toa) TSY mahay (mamaky) baiboly akoriny. TAntara ao anaty Baiboly dia TSY hainy, na ny votoatiny, mainka moa fa ny pejy na ny toko aman'andininy. Nefa ho'a, raha miondana Harry Potter ianao, dia hainao kintana be mihintsy ny pejy na chapitre misy ny sombin-tantara rehetra.
Ka ndao tsapaina azany ny fahaizana Baiboly eto eee... Défi ity r'ireto aa...
1- IZA no miteny, na mandefa fantsy, hoe "mifaninona moa"... i A sy B ohatra, ary TAIZA, na ameo ny toko aman'andininy aiza izany tantara misy izay fantsy izay?
Tsy izany fa raha izaho manokana aloha, dia tena TSY mba mampiasa io vokabolary hoe "mifaninona" io... Amiko, samy olombelona daholo isikana, ary eo foana ny "fihavanana" @ maha-Malagasy ny tena, ka "mifaninona" @ inona ny resaka raha tsy hoe, dia samy olb, samy havana daholo eee... Satria ilay fampiasana ity "mifaninona" ity, dia midika fa te- "hifanilika" na "hifanavaka".
rhaj0 - 08/11/2017 21:19
Aleo azany tonga dia atomboko ee... Izaho nahita iray:
Lioka 8: 28 Fa nony nahita an'i Jesosy izy, dia niantso mafy sady niankohoka teo anatrehany ka niteny tamin'ny feo mahery hoe: Moa mifaninona akory izay sy Hianao...
Ka tena TSY havan'ny Demony izany i Jesosy eto e...
Entre-pa fa Baiboly protestantan'i Andrianaivoravelona (baiboly.org) no "mifaninona mifaninona" io. Fa ny an'ny Katolika (Hery serasera.org) efa nahitsiny hoe "Misy inona raharahainao amiko..."
gasy1zay - 08/11/2017 21:56
Tsy aleo ve aloha mianatra grika kely rhaj0 fa tsy teo ihany io teny io no nampiasaina.
rhaj0 - 08/11/2017 22:00
hi hi hi... tena isan'ny TSY mahay (mamaky) Baiboly koa ve i Gasy1zay, ka tsy ny fahaizany no tsapainy, fa resaka hafa no itariny?
Tena défier-ko ianao ry Gasy1zay, fa tena TSY mahay tantara misy mifantsy hoe, "mifaninona moa.. i A sy B". Dia anarany fotsiny koa izany ianao Gasy1zay miondana Baiboly, nefa TSY mahay sy mahatadidy ny tantara vakianao ao an... Mampalahelo.
gasy1zay - 08/11/2017 22:22
Voalohany aloha dia tsy Jesoa no niteny eto fa ilay devoly
Faharoa teny fananjana io fa tsy manilikilika araka ny eritreretin'i rhaj0, tsy misy olona mandohalika anoloan'ny olona 1 (Mpanjaka) ka hitratrevatreva, mba jereo nge tony dikateny Second 21 itony e : Quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: «Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très-haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas.»
Ka mbola averiko ihany fa mila mianatra tenifototra ( Grika ) isika na mijery dikateny hafa raha tena te hahazo ny contexte mety tsy dia mazava toy io.
Miharena - 09/11/2017 07:53
Raha ara-tantara dia ampy ny Baiboly milaza fa efa nazera ireo Anjely niaraka tamin'ny lehibeny izay nikomy tao an-danitra. Iray amin'ireo io niresaka tamin'i Jesoa io. Tsy manana anjara fikarakarana avy amin'Andriamanitra intsony satria efa nihataka dia niteny io teny io nony nifanehitra indray. Satria aoka hazava fa efa fantatr'ireo tsara fa Jesoa no Mpanjaka sy Zanaky ny Avo Indrindra.
Efa henjana ny nahazo an-dry zareo ireo tamin'ny nandroahana azy ary fantany tsara izany dia izany no nilazany hoe hampijaly anay ve ny nahatongavan'i Jesoa eto amin'ity andinin-tSoratra ity.
Ny fanontaniako amin'ingahy Rhaj0 dia hoe inona no tiany hahatongavana nanamarika io fanontaniana io. Ny olana eto dia hoe te-hiteny ve izy fa hoe ateista dia tsy mifaninona amin'i Jesoa?
Raha izay manko dia mifampikarakara amin'ilay antoko iray mitaraina io izy izany ve !
Enga ka hosanatriavina anie izany Rhaj0!
rhaj0 - 09/11/2017 14:16
gasy1zay Voalohany aloha dia tsy Jesoa no niteny eto fa ilay devoly
Faharoa teny fananjana io fa tsy manilikilika ...
Inona no mahakaodikaody an'i Gasy1zay ee.. Tsy miseho mihintsy eto fa i Jesosy no niteny ity hoe, "mifanao inona" i A sy B.
Dia io ho'a izany, dia ny Demony no mifantsy, ary te-hifanavaka @ Jesosy hoy aho, fa "manaja" an'i Jesosy hono, hozy i Gasy1zay. Aleo ny mpamaky no hitsara.
Fa mampihomehy i Gasy1zay lasa manindrahindra ny fianarana teny fototra (grika) HONO.
1- F'angaha tsy Hebreo ilay orijinaly re ry Gasy1zay?
2- Ary f'angaha TSY mitombona intsony koa lay hoe "izay voasoratra dia voasoratra"???
RBNIR - 09/11/2017 15:50
Ilay resaka tato v no mampiteny an'i rhajo an'io???
Araho tsara aloha ilay resaka atsy e!!! aza malaky......
rhaj0 - 09/11/2017 15:56
F'hita fa ny an'i RBNIR teo, i Marka no tiatiany kokoa, ary tonga dia "tsarainy" fa diso i Lioka (vavolombelona). Izany no "fahaizana (mamaky) Baiboly" @ RBNIR.
Dia rehefa samy nanadihady ihany, dia izaho indray no toa nahita dia namoaka ny tatsy @ Matio. Anarany fotsiny ho'a ianao ry RBNIR miondana Baiboly ao, nefa toa tsy hitanao akoriny ny chapitres maneho ny "toetran'i JEsosy", hitan'ny vavolombelona isan-tokony tao.
gasy1zay - 09/11/2017 17:24
Testamenta taloha : hebreo
Testamenta vaovao : grika
ny nandika teny olombelona fa ny tompon'ny Teny no Andriamanitra.
Raha i rhaj0 izao no nasaina nandika teny dia inona no handikan'i rja0 ito
Manahoana : Comment ça va sa bonjour?
Raha tsy mahay teny gasy ianao dia mety hisalasala an! Izay no nilazako hoe ilaina fantatra ilay teny fototra na mila mijery dika teny hafa.
RBNIR - 09/11/2017 17:57
Lioka 8: 28[/b] Fa nony nahita an'i Jesosy izy, dia niantso mafy sady niankohoka teo anatrehany ka niteny tamin'ny feo mahery hoe: Moa mifaninona akory izay sy Hianao...
Vao teraka kelikely Jesosy dia nentina tany amin'ny mpaminany Simeona,
Dia naminany i Simeona ka nilaza tamin'i Maria renin'ny zaza hoe....
« Ary Simeona nitso-drano azy ireo ka nanao tamin'i Maria, renin'ny Zaza, hoe: Indro, Ity Zaza ity no voatendry ho fandavoana sy ho fananganana ny maro ao amin'ny Isiraely ary ho famantarana holavina » (Lio.2:34)
« ary ny fanahinao aza dia hotsatohana sabatra - mba haseho ny hevitry ny fo maro. » (Lio. 2:35)
Hoy izy hoe ny fanahinao aza dia hotsatohana sabatra....Io fa tanteraka tao amin'ny Lio.8:28 ilay izy.....
Ny antony dia hoy i Simeona hoe ......"mba haseho ny hevitry ny fo maro"
Ka tsy izany v no zavatra miseho eto ry rhajo????? nanao teny hafahafa nanindrona ny fanahin'i tamin'i Maria reniny i Jesosy (izay ilay sabatra)dia io fa miseho eto avokoa ny hevitry ny fo maro????
« Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. » (Heb.4:12)
rhaj0 - 09/11/2017 18:01
Namadibadika gogola kely aho, dia hoe
- i Jesosy dia Jiosy, ary izany teny Aramaic izany hono ny tenin-dreniny (jiosy palestiniana)
- ireo apaositaoly koa, toa an-dry Saoly lasa Paoly, dia niteny Aramaic; fa ny teny Koine Greek tokoany hono no fampiasa, na dia zana-tany Romana azany ny tao. Dia ry Paoly mbamin-dry Peter moa mahay teny Romana
- dia izay teny nosoratan'ny mpiteny Aramaic, no nadika Grika, dia nadika t@ teny Anglisy/Frantsay, izay vao nadika t@ teny gasy, dia mbola io vao noapalesin'ny Pasitera gasy io.
ka "izay voasoratra" izany dia bingo eee...
Fa ilay "mifaninona" dia, raha migogola koa aho, dia tena maro ny dika-teny talohany.. Asa inona no noraisin'i Andrianaivoravelona avy t@ teny anglisy ohatra, ka mifanojo @ teny "mifaninona" @ Malagasy.
what to me and to You
What do You have to do with me
What business do we have with you
Ka azoko ny an'i Andrianaivoravelona raha izany:
"mifaninona" moa isika? = Tena "tsisy fihavanana" ny amintsika = Tena toa ny hoe, any ianao, izaho aty = tsisy iraisantiska, na toatoa izany.
izany hoe ho'a, mifanilika sy mifanavaka ny tiana tenenina eo, raha ny fahitako azy.
rhaj0 - 09/11/2017 18:51
Miharena Ny fanontaniako amin'ingahy Rhaj0 dia hoe inona no tiany hahatongavana...
hi hi hi... tena TSY (mahay) mamaky Baiboly marina ilay Miharena ity.. Izay mahay ny sombin-tantara rehetra (ao anaty Baiboly) sady mahalala ny pejy sy toko aman'andininy'izany, toa ny famakiana Harry Potter ho'a, dia efa mahafantra ny "tian'Ingahy Rhaj0 hahatongavana"
Ho Avy Tsy Ho Ela Ny Vaovao An-Tsary eee...
Miharena - 09/11/2017 19:24
Ka mazava anie io hoe nosarahana tsy handeha any an-danitra intsony ny Devoly dia io miresaka io ka inona no maharisarisa an-dRhaj0 eto?
Ny mafy loha anie no tsy mandraharaha ny Fahasoavana nomena azy teny am-piandohana. Dia iza no tianao omena tsiny eto?
endriny - 10/11/2017 07:08
Rahoviana no valim-panadinana?
RBNIR - 10/11/2017 11:26
Raha ny voasoratra dia hoe....
« Saingy tsy tanterahina vetivety ny famaliana ny ratsy atao, dia izany no ikirizan'ny fon'ny zanak'olombelona amin'ny fanaovan-dratsy. » (Mpitoriteny 8:11)
rhaj0 - 10/11/2017 15:00
TSY "fanadinana" ilay izy fa "fitsapanapana" (fahaizana) fotsiny ry Endriny aa...
Mbo kitikitihina eto (hoe hatraiza) ny halalin'ny fahaizan'ny Kristiana Baiboly, raha hoe, mahery noho ny fahaizana ny bokin'i Harry Potter ohatra ho'a.
Mahavariana an.. na koa hoe misy film favori ireny, dia jerena in-3 ohatra, dia tena hay tsianjery daholo hoe aiza ho aiza ny sombin-tantara nankatsy nankaroa.
Fa ny Baiboly ho'a ee... efa isan'andro, na fara-faharatsiny isan-kalahady ao ihany, nefa tena betsaka no TSY mahalala ny sombin-tantara. Koa na atao hoe, ny fiainan'i Jesosy fotsiny no hanaovana ezaka manokana fa ... esy eee.. bokikely 4 fotsiny anie izany eee.. Matio/Marka/Lioka/Jaona. Fa dia mihahaka eto daholo ry Miharena sy RBNIR ary Gasy1zay ee...
Miharena - 10/11/2017 19:14
Dia aza avilivily toy io ary ilay lohahevitra mba atsanganao fa omeo amin'izay izay fantatrao momba io fanokafana io.
rhaj0 - 11/11/2017 17:53
Fanontaniana 1 1- IZA no miteny, na mandefa fantsy, hoe "mifaninona moa"... i A sy B ohatra, ary TAIZA, na ameo ny toko aman'andininy aiza izany tantara misy izay fantsy izay?
io moa ny "fanadinana" mbo napetrako, ary dia miara-mahita eto izao, fa TSY mamaly ny fanontaniana ry Gasy1zay mbamin-dry Miharena sy RBNIR, SATRIA.. TSY mahay (mamaky) Baiboly. Ary ny valin-tenim=panadinana mba hitaKO no saforan-drizareo resaka an-jorony.
Fa izaho indray izao mahita fanin-2 ee.. (henatra ho anareo TSy mahita resaka "mifaninona" satria TSY mahay Baiboly; nefa ho'a raha Harry Potter io efa hay daholo ny sombin-tantara)
II Mpanjaka 3:13 Ary hoy Elisa tamin'ny mpanjakan'ny Isiraely : Moa mifaninona akory izaho sy hianao ? Mandehana any amin'ny mpaminanin-drainao sy ny mpaminanin-dreninao hianao...
Eto izany izao, dia hitabe fa ny fampiasana ilay teny hoe "mifaninona" dia tena ny hifanavahana sy hifanilihana. Tena hotsahotsan'ny hozy Elisa hoe, mandehana faty any @ izay an-dray sy reninao any ianao, f'aza mba aty no mitonantonana.
Miharena - 13/11/2017 09:42
Tantara mazava be io Rhaj0.
Tantaran'ny mpanjaka izay efa mahalala nefa ilaozany mandeha any amin'ny tsy andriamanitra aloha fa fara-safidy vao Jehovah nefa efa eo amin'ny taniny Jehovah ary miandry isanandro azy hanatona Azy amin'ny zava-drehetra saingy tsy izany no ataony fa Bala-zeboba aloha vao Jehovah ka rehefa maloto vao manatona ny Masina tsy ho faty ho azy ve?